Binary Options ကိုအတူ9ယောဘအား5Quit | Binary Option ကိုအရောင်းအဝယ်ဖြစ် Start - စတော့အိတ်အွန်လိုင်း Investing
ဟုတ်ကဲ့တစ် binary options များကုန်သည်ဖြစ်ခြင်းအကြောင်းရင်းတစ်ခုလုံးစာရင်းများအတွက်အလုပ်အကိုင်အ9တစ်5ရှိခြင်းထက် သာ. ကောင်း၏။ သင်အလိုရှိရာအရပ်, သငျသညျအလုပ်မလုပ်နိုင်ပြီးသင်မှာ yells သူတစ်ဦးသူဌေးမရှိကြပါဘူး။
အဘယ်ကြောင့်ထရေးဒင်း Binary Options ကို9ယောဘအားတစ်ဦး5Beats ။
binary options များအတွက်ထရေးဒင်းအလုပ်9တစ်5beats ။ ရုံကစဉ်းစား: ကအဘယ်ကြောင့်ကြည့်ရှုဖို့တော်တော်လွယ်ကူပါတယ်။
9 အလုပ်အကိုင်များမှအများစုမှာ5မယုံနိုင်လောက်အောင်ပျင်းစရာရှိပါတယ်။ သငျသညျနှစျခု (အစောပိုင်းအိပ်သွားကြဖို့ရှိသည်နှင့်စောစောထနိုး
တော်တော်များများကိုစို့နဲ့ဘယ်သူမှတကယ်) လုပ်ဖို့ likes ရသောအမှုအရာ။ သငျသညျ, ထို့နောက်ရေချိုးရိတ်, တစ်ဦးအလုအယက်၌သင်တို့၏ကော်ဖီပါစေနှင့်တံခါးကိုထွက်ရှိသည်။
ဒါကြောင့်မိုးရွာမယ့်လျှင်, သင်ထားတဲ့ထီးနှင့်သင့်တစ်နေ့တာ damp နှင့်စိတ်ဆင်းရဲဖြစ်မယ့်လိုအပ်ပါတယ်။ ပူမှထွက်မယ့်လျှင်, သင်ချွေးစေးနှင့်မသက်မသာဖြစ်လိမ့်မယ်။
သင်တစ်ဦး binary options များကုန်သည်အဖြစ်မလုပ်ကြပါဘူး။ သင်အလိုရှိသောအခါသင်နိုးထ, သင်အိမ်မှာအနားယူနှင့်နံနက်စာသုံးဆောင်ခြင်းနှင့်ကော်ဖီသောက်နှင့်အတူသင်၏အချိန်ယူပါ။
သငျသညျအချိန်ရှိသည်ဘာလို့လဲဆိုတော့သင်ဟာနောက်မှအစားမတိုင်မီရေချိုး။ သင်တစ်ဦးကိုပုံမှန်အလုပ်ရှိပါကသင်အသွားအလာ Brave နှင့်နံနက်နှင့်ညနေပိုင်းအလုအယက်နာရီအတွင်းလမ်းမပေါ်တွင်မတော်တဆမှုအန္တာရာယ်ဖို့လိုအပ်ပါတယ် - ယာဉ်မတော်တဆမှုအများဆုံးဖြစ်သည့်အခါ။
သို့မဟုတျ, နှစျသိမျ့၏စည်းကမ်းချက်များ၌ပိုဆိုး, သငျသညျအများအားဖြင့်အအေးမိသို့မဟုတ်အပူအတွက်အပြင်ဘက်တွင်စောင့်ဆိုင်းနေကိုဆိုလိုသည်နှင့်ဆောင်းရာသီကာလအတွင်းအအေးသို့မဟုတ်တုပ်ကွေးဖမ်းအန္တာရာယ်အရာအများပြည်သူသယ်ယူပို့ဆောင်ရေးအပေါ်ရဖို့ရှိသည်။
binary options များကုန်သွယ်အတွက်ရင်းနှီးမြှုပ်နှံလိုတဝိုက်ရွှေ့ဖို့ရှိသည်, နှင့် binary options များအရောင်းအဝယ်ဖြစ်သင်ကယ့်ကိုအဲဒီလိုလုပ်ဖို့အကောင်းဆုံးကိုအချိန်မပေးမယ့်အခါ, ထွက် သွား. ရန်မလိုပါဟုမဆိုလိုပါ။
သငျသညျထို binary options များရင်းနှီးမြှုပ်နှံမရင့်လျှင်အလုပ်မှာ, သင်တို့ရှိသမျှသည်နေ့ရက်သည်စားပွဲခုံမှာထိုင်နဲ့ပစ္စုပ္ပန်ကိုကြည့်ဖို့ရှိသည်။ သို့မဟုတ်, သင်ဒြပ်စင်အတွက်, ဒါမှမဟုတ်ဧရာမဂိုဒေါင်သို့မဟုတ်စက်ရုံအတွက်ပြင်ပမှာအလုပျလုပျဖို့ရှိသည်။
ဒါဟာသင်စိတ်အေးလက်အေးမဟုတ်ပါဘူး, အနံ့, သင်မပျော်ရွှင်ပါတယ်။ တကယ်တော့သူကစဉ်းစားခြင်းငှါလာကြ: မည်သူမဆိုတကယ်ကသူတို့သူဌေးကကြိုက်တယ်သနည်း? သငျသညျသငျနှငျ့အတူအလုပ်လုပ်ဝက်ကိုလူကပင်ကြိုက်နှစ်သက်ပါသလား?
binary options များကုန်သည်များသည်ဤမဆိုနှင့် ပတ်သက်. စိုးရိမ်ပူပန်ကြပါဘူး။ သူတို့ကသူတို့ခြေတက်ထားသူတို့ရဲ့လက်တော့ပ်ကိုဖွင့်, Google ကတက်ဆွဲထုတ်မှာရှာဖွေနေစတင်နိုင်ပါသည် binary options များသတင်း နှင့်အခြားအမှုအရာတို့ကိုကူညီပါ။
သူတို့ဟာမှာ NASDAQ ဇယားကိုဖတ်ပြီးနှင့်သူတို့၏အကြိုက်ဆုံးသီချင်းနားထောင်နိုင်သည်။ သူတို့လိုလျှင်သူတို့ရေသုတ်ကုတ်အင်္ကျီထဲကတစ်ချိန်ချိန်ပြောင်းလဲနေတဲ့စဉ်းစားနိုင်ပါတယ်။
binary options များကုန်သွယ်ဘယ်နေရာမှာမဆိုနှင့်နံနက်အတွက်နေအိမ်ထဲကနေအလုပ်လုပ်ဆိုလိုတယ်ကြောင်း binary options များအများစုကုန်သည်များအဘို့ထဲကနေအလုပ်လုပ်နေသည်။
ပုံမှန်အလုပ်နှင့်အတူ, သင်သည်ဤမဆိုလုပ်နေကြ၏ဇိမ်ခံကားများမည်မဟုတ်။ သင်ကရုံးမှချုပ်ထားလိမ့်မယ်နှငျ့သငျအခမဲ့မဟုတ်ပါဘူး။ သငျသညျထိုအရပ်၌ငါထိုင်နှင့်သင်သည်သင်၏ပိုက်ဆံ "ဝင်ငွေ" အဖြစ်သငျသညျအရာတစ်ခုခုလုပ်နေလုပ်နေတူထင်ပါတယ်။
လူအများစုအဘို့, ထိုအများအားဖြင့်တစ်ဦးထောင်ဒဏ်စဉ်အတွင်းကျချိန်ရေတွက်ကဲ့သို့ဖြစ်၏ရာရှစ်နာရီနေ့တိုင်းငါးရက်တစ်ပါတ်, ချရေတွက်ဆိုလိုသည်။
binary options များပိုင်ဆိုင်မှုကုန်သည်များနာရီကိုချမတွက်ပါ။ ဘာမှမဆိုရင်သူတို့ကနေ့လယ်စာကိုစဉ်းစားရန်စတင်ရွှေငွေအညွှန်းကိန်းများနှင့်နည်းပညာအညွှန်းကိန်းများနှင့်သတင်းနှင့် ပတ်သက်. ဖတ်ရှုပြီးနောက်, သူတို့က ထွက်. စားရန်တစ်ခုခုရဖို့ပါလိမ့်မယ်ဘယ်လောက်ကောင်းတဲ့စဉ်းစားရန်စတင်လို့ပဲ။
သူတို့ဟာတစ်ခုခုကိုမွန်းတည့်အချိန်၌ထိုသို့ပြုမှမလိုအပ်ပါဘူး။ သူသို့မဟုတ်သူမလိုလျှင်တစ်ဦးက binary options များစျေးကွက်ကုန်သည်ကလုပ်နိုင်ပါတယ်။ ဒီတစ်ခါလည်းသူတို့ကိုနှင့်အတူ၎င်းတို့၏ Laptop ကို ယူ. တစ်ဦး Starbucks ကဖီး, ဒါမှမဟုတ်တစ်ဦးကောင်းတဲ့စားသောက်ဆိုင်ကနေတချို့ကိုပိုမိုရောင်းဝယ်ဖောက်လိမ့်မယ်။
12 သို့မဟုတ် 30: 1 binary options များကုန်သွယ်ပညာရှင်များသူတို့ 00 အားဖြင့်နောက်ကျောဖြစ်ဖို့ရှိသည်သောသူတို့အားပြောပြမယ့်သူဌေးကရှိသည်မဟုတ်ကြဘူးဘာလို့လဲဆိုတော့သူတို့ကအစနေသမျှကာလပတ်လုံးသူတို့စားရန်ကြိုက်သလောက်ယူနိုင်ပါတယ်။
သငျသညျထို binary options များသို့မဟုတ်ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမရနေတယ်ဆိုရင် binary options များမြှင့်တင်ရန် Affiliate သည်အခြားရင်းနှီးမြှုပ်နှံသူများ, သင်ပြန်ထိုင်နှင့်သင့်အချိန်ကိုခံစားလို့မရပါဘူး။ သင်တို့သည်လည်း "ရုံးနိုင်ငံရေးကို" နဲ့ကိုင်တွယ်ရန်ရှိသည်။
ထိုလူအပေါင်းတို့ကဤတစ်စုံတစ်ဦး binary options များအရောင်းအဝယ်ဖြစ်နေစဉ်အတွင်းကျောအိမ်မှာဖြစ်ကောင်းဖြစ်ပါသည်, သို့မဟုတ်သက်သာအဆမတန်ကြီးမားကုလားထိုင်မှာမှာ Starbucks က အရာသင်အလုပ်များအတွက်အလုအယက်အတွက်အမြဲနေဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့၌ထိုင်ရဘယ်တော့မှနှင့်သူသို့မဟုတ်သူမအမေရိကန်ဒေါ်လာသို့မဟုတ်ယူရိုစျေးနှုန်းများထွက်စစ်ဆေးနေဒါမှမဟုတ် Dow Jones, ဒါမှမဟုတ်နောက်ဆုံးပေါ် Sony က gadget ကသို့မဟုတ် Apple ကဖြန့်ချိအကြောင်းကို Google မှာပိုပြီးသတင်းကိုဖတ်ရှုနေသည် ။
သူသို့မဟုတ်သူမတစ်စုံတစ်ယောက်သူတို့ကိုမှတက် လာ. ထိုသူတို့ကိုလုပ်အားခမကုန်မီတာဝန်ပေးခြင်းစတင်ရန်အံ့သောငှါစိုးရိမ်နေကြသည်မဟုတ်။
သင်အမှန်တကယ်မတ်နေလျှင်, binary options များကုန်သည်အဖြစ်, သင်ပင်လှပသောဟိုတယ်လော်ဘီတစ်ဖီး၌ထိုင်နိုင်ပါတယ်။ ရုံ, စမတ်ဝတ်စားဆင်ယင်သင့်ရဲ့ Laptop ကို ယူ. , တချို့ကော်ဖီရှိသည်နှင့်ပတ်ဝန်းကျင်ပျော်မွေ့။
သငျသညျအလုပ်9တစ်5နဲ့မပွုနိုငျသညျ။ သို့သော်ထို binary options များ၏အွန်လိုင်းမှကုန်သည်အဖြစ်, သင်နှင့်တူသောနေရာများအတွက်အထဲကဆွဲထားခြင်းနှင့်အစိတ်အပိုင်းကိုကွညျ့ရှုနိုငျပါသညျ။ သငျသညျမျှမျှတတချမ်းသာကြွယ်ဝလူများကဝိုင်းရံများနှင့်အောင်မြင်သောခံစားရနိုင်ပါတယ်။
သငျသညျထို binary options များကုန်သွယ်မှာအောင်မြင်သောနိုင်ပါတယ်ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့ဒါကပါပဲ။ သငျသညျလှပသောအရာများနှင့်လေထုနှင့်အလွန်ကြွယ်ဝသောလူများကဝိုင်းရံနေကြသည်သောအခါ, သင်တစ်ဦးဆုရှင်များကဲ့သို့ခံစားမိပါလိမ့်မယ်။
ဘယ်သူမှအလုပ်မှာဆုရှင်များကဲ့သို့ခံစားရ၏။ ပြည်သူ့မသက်မသာနှင့်အချိန်အဘို့အဖိ, ဒါမှမဟုတ်မသက်မသာနှင့်မယုံနိုင်လောက်အောင်ပျင်းခံစားရတယ်။ သူတို့ကသူတို့ရဲ့သူဌေးကသူတို့ကိုအွန်လိုင်းဂိမ်းကစားရုံအချိန်သတ်ဖြတ်တွေ့မြင်အံ့သောငှါစိုးရိမ်နေကြပါတယ်။
သင်တစ်ဦးသည်အကျဉ်းကြောင့်သင်တစ်ဦးသည်အကျဉ်းနဲ့တူခံစားကြရသည်။ တစ်ဦးက binary options များကုန်သည်ဤနည်းခံစားရဘူး။ သူတို့ချင်တယ်နှင့်သူတို့ချင်တယ်ဘယ်လိုဝတ်စားဆင်ယင်ရှိရာသူသို့မဟုတ်သူမထွက်ဆွဲထားတဲ့, သူတို့ရဲ့ binary options များရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုများအွန်လိုင်းသိသာထင်ရှားသောအကျိုးအမြတ်ဝင်ငွေအလုပ်လုပ်နေကြသောကြောင့်, သူတို့က Facebook စာမျက်နှာမှာသူတို့ကြိုက်နှစ်သက်အားလုံးကြည့်ရှုနိုင်ပါတယ်။
ထို့နောက်အလုအယက်နာရီအသွားအလာလာပါတယ်။ အဲဒီကအကြီးမားဆုံးနာကျင်မှုသည်မဟုတ်လား အမျက်ထွက်ခြင်းနှင့်မော drivers တွေကိုအပြည့်အဝညမှာအမှောင်လမ်းများ။ တစ်ဦး binary options များကုန်သည်အဖြစ်, သင်စိုးရိမ်ရန်မလိုပါ။
သင်ရုံပြန်ထိုင်နှင့်သတင်းပေါ်တက်ကိုဖတ်, ဒါမှမဟုတ် Facebook ပေါ်မှာ post, ဒါမှမဟုတ်ပင်အမေဇုံမှာအွန်လိုင်းစျေးဝယ်နိုင်ပါတယ်။ အခါသင် binary options များရောင်းဝယ်ဖောက်, သင့်အချိန်သင့်ကိုယ်ပိုင်ဖြစ်တယ်, သငျသညျအခြားတစ်စုံတစ်ယောက်သငျသညျအသကျရှငျဖို့လိုလားလမျး၌အနည်းငယ်သာ-တပ်ရင်းနှစ်ပိုင်းသင့်ရဲ့တစ်နေ့တာဖြတ်ဖို့မလိုပါ။
Tags: ဒွိကုန်သွယ်ခွဲခြမ်းစိတ်ဖြာ, ဒွိကုန်သွယ်အခြေခံ, ဒွိကုန်သွယ်ပွဲစားများ, ဒွိကုန်သွယ်စီးပွားရေးလုပ်ငန်း, ဒွိကုန်သွယ် crypto, ဒွိကုန်သွယ်ကျွမ်းကျင်သူများက, ဒွိကုန်သွယ်လမ်းညွှန်, ဒွိကုန်သွယ်ဘယ်လိုအလုပ်လုပ်သလဲ, ဒွိကုန်သွယ်ညွှန်းကိန်း, ဒွိကုန်သွယ် option ကို, ထို binary ကုန်သွယ်ပလက်ဖောင်း, ဒွိကုန်သွယ်မဟာဗျူဟာ, တစ်ဦး binary ကုန်သွယ်ကားအဘယ်သို့